Qaraxyo Khasaara Dhaliyay Oo Ciidamada Itoobiya lagula Eegtay Duleedka magaalada Kismaayo.
Dhageyso: Taliban oo soo saartay tirakoob ku saabsan Weeraradii ay fulisay bishii lasoo dhaafay.
Muslimiinta iyo Gaalada Yaa Ku Horreeyay Caafimaadka? [Warbixin].
Dhageyso: Sidee Ganacsigaaga uga dhigi kartaa mid aad Jannada ku gasho?
35 qof Muctamiriin ah oo ku dhintay Shil baabuur oo ka dhacay Wadanka Sacuudiga.
Video: Nin kamid ah shacabka degmada Balcad oo iska diiday xil loo magacaabay
Thursday July 25, 2019 - 19:37:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo dhaq dhaqaaq ka waday deegaano dhaca duleedka Kismaayo ayaa lala eegtay qaraxyo xooggan kuwaas oo geystay khasaare kala duwan.
Sawir hore gaari laga gubay ciidanka Kenya
Qaraxyada oo gaarayay illaa labo qarax mid ka mid ah waxaa lala helay gaadiid ay wateen ciidamada Xabashida Itoobiya sida ay sheegayaan ilo wareedyo laga helay duleedka Kismaayo waxaana jira waxyeelo xoogan ayaana gaartay ciidamada labeegsaday.
midka labaad oo daqiiqado oo kaliya ka dambeeyay qaraxii hore ayaa isna lala helay ciidamo kale oo kusoo xoomay gaariga la qarxiyay si ay u daabulaan meydadka iyo dhaawacyada sida ay xaqiijiyeen saraakiil katirsan Al Shabaab oo lahadlay Idaacadda Andalus.
Gaari Ambalaas ah iyo mid kale oo Uraal ayaa meydadka ciidamada Xabashida u qaaday dhanka Kismaayo halkaas oo ay soo caga dhigatay diyaarad kasoo duushay magaalada Baydhabo oo ah halka uu ku yaallo taliska ugu weyn ee ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Illaa iyo hadda tiro rasmi ah oo ku aaddan khasaaraha dhimasho iyo midka dhawac ee ka dhashay qaraxyadii maanta lama hayo waxayna Kolonyadii cadowga ee halkaas falalka arbushaada ah ka waday oo ka koobnaa ilaa 28 gaari ay dib ugu gurteen dhanka magaalada Kismaayo oo markii horaba ay kasoo dhaqaaqeen.
Taliye katirsan ciidamada maamulka 'Puntland' oo si dirqi ah uga badbaday qarax ka dhacay Gaalkacyo.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu qarxiyay deegaanno katirsan gobolka Baay.
Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto Ee wadanka Canada.
Ciidamada Dowladda oo faarujiyay deegaan katirsan Sh/dhexe iyo Al Shabaab oo dib ula wareegay.
Melleteriga Turkiga iyo Ciidamada Bishaar Al Asad oo qarka usaaran in ay ku dagaallamaan Waqooyiga Suuriya.
Dad Itoobiyaan ah oo ku dhintay Musiibo ka dhacday gobolka Konta.